Khabiir Cajiib ah wuxuu ogaanayaa sida loo xakameyn lahaa spam u gudbinta Google Analytics
Spam u gudbinta qof kasta, gaar ahaan qof ka shaqeeya bogga internetka e-commerce. Markaad eegto xogta shabakada Google Analytics, waxaad marqaati ka noqon kartaa kiisaska spam u gudbinta goobtaada. Way adagtahay in la qiyaaso oo lagu qiimeeyo waxqabadka dhabta ah ee dadaalka suuqgeynta internetka
Qaar badan oo ka mid ah tilmaamaha ku saabsan sifeynta spam gudbinta ma u muuqdaan inay shaqeeyaan. Xaalado badan, dadku waxay maal-galiyaan macaashka macaamiisha SEO-ka ah kuwaas oo soo afjaraya dadka gaadiidka ah ee ka imaanaya spam gudbinta ama qotoda - network security technologies in Portland. Waxaa jira habab kaa caawin kara in aad ka saarto taraafikada taraafikada ee Google Analytics.
Qaar ka mid ah farsamooyinka la xariira spamka waxaa halkan ku qeexan Andrew Dyhan, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt .
Waa maxay spam gudbinta
Spam diritaan ayaa ah gaadiidka kaas oo ku yimaada website-kaaga oo ka soo jeeda meelo kale. Xaaladaha intooda badan, dib-u-qabasho kasta wuxuu u gudbiyaa xogta spam ee loo gudbiyo qofka. Qaar ka mid ah xayndaabyada ay ku jiraan booqashooyinka websaydhka been abuurka ah waxay ka yimaadaan qoryaha ama shabakadaha khadka. Spam soo gudbinta wuxuu ku dhici karaa labo siyaabood:
Spam referring buuggu wuxuu muujinayaa bogga Google Analytics. Sidoo kale, booqashooyinka websaydhka been abuurka ah ayaa laga yaabaa inay ku muujiyaan xogtaada falanqeynta laakiin ma aha dashboardkaaga. Booqashooyinka bogga aan qarsoodi ahayn waxay sameeyaan booqashooyinka bogan ee dagan
Qaar ka mid ah aaladaha waxaa laga yaabaa inay ku jiraan xayndaabka gaadiidka..Gelitaanka booqashooyinka webka laga soo galo waxay u horseedi karaan bog internet ah in ay booqdaan bogag badan oo ka yimaada ilaha aadanaha. Botnets iyo mashiinnada webka waxay u horseedi karaan waxyeelo badan oo ku saabsan macluumaadka bogga
Labada xaaladoodba, gudbinta gaadiidku waxay keenaysaa macluumaad been ah oo ku saabsan horumarka ololaha suuq-geynta. Intaas waxaa dheer, booqashada bogaga badan oo dagan ee ka imanaya spam u gudbinta samaynta geeddi-socodka SEO-ku wuxuu u hoggaansamayaa kormeerida iyo hagaajinta ujeedooyinkaaga guud
Bixinta spam gudbinta
Dadku waxay ka saari karaan taraafikadan Google Analytics kaddib tallaabooyin fudud oo fudud. Mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka ah ee hawshan qabata waa adigoo ku dhexjiraya faylka .htaccess diiwaanka xididka domainka. Faylkan wuxuu kuduujinayaa gawaarida habka ugu haboon ee loo xallinayo codsiyadaada. Dadka isticmaala adeegga Apache waxay u hoggaansami karaan amarrada qaar si ay u sameeyaan isbedelkaas. Xakamaynta geeddi-socodka daryeelka waa muhiim. Inay hoos u dhigto websiteka oo dhan waa mid aad u fudud inta lagu jiro codsiyada.
Soodhada spam ee sarreysa ayaa kaa caawin kara inaad ka saarto spam gudbinta. In xisaabta Google Analytics ah, waxaad isticmaali kartaa muuqaalkan ee menu admin. Waxaa intaa dheer, waxaad awoodi kartaa inaad ku daro shaandhada gaarka ah qalabka. Filtarrooyinkani waxay xakameyn karaan baabuurta ka imaanaysa degaan gaar ah. Waxa kale oo suurtagal ah in laga hortago taraafikada adigoo isticmaalaya cinwaanka IP Bixiyaha adeegga emailka ah ayaa kaa caawin kara helitaanka qaar ka mid ah weerarrada spam ee lagu beegsanayo xisaabaadka email-ka ah.
Spam u gudbinta waxay hoos u dhigi kartaa saxnimada xogta ku jirta koontada Google Analytics. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro taraafikada gudbinta gudbinta maaddaama natiijooyinka been abuurka ahi keeni karaan khasaare kheyraad. Intaa waxaa dheer, gaadiidkan waxa uu dadka u keenaa inay sameeyaan go'aano khalad ah oo ku saabsan habka ololaha suuq-geynta internetka . Waa lagama maarmaanka u ah shirkad kasta ama ganacsi inay la tacaalaan spam gudbinta. Qaar ka mid ah fikradaha aad u isticmaali karto si aad u tirtirto spam gudbinta ayaa ku jira qormadan.